Microsoft Defender ATP yave kuwanikwa yeLinux uye munguva pfupi yeIOS uye Android | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Defender ATP yave kuwanikwa yeLinux uye munguva pfupi yeIOS uye Android
Microsoft yakagovana zvinhu zvakawanda nhasi pamberi peRSAC 2020 ichaitwa svondo rinouya muSan Francisco. Kubva pane ruzivo rwese Microsoft yakagovaniswa, yakawanda yacho yaive yakabatana nenhau dzekuchengetedza uye chiziviso chikuru ndeche kuwanikwa kwese kweMicrosoft Threat Dziviriro, iyo inoshandisa AI kupa inoenderana maonero ekutyisidzira uye otomatiki kugadzirisa ivo.
Zvakare kune rimwe divi, chimwe chiziviso chakaitwa neMicrosoft icho chakakodzera kutaura inyaya dze Microsoft Defender ATP umo maakafumura vhezheni yayo yeLinux Uye kuenderana kweApple neIOS kuri kuuya, pamwe neInsider Risk Management uye Azure Sentinel.
Kutanga neMicrosoft Threat Dziviriro (yakaburitswa sechiitiko chekutarisa pachena muna Zvita), inopa mhinduro yakasanganiswa yakavakirwa muMicrosoft 365 yekuchengetedza suite. Izvi zvinosanganisira Defender Yepamberi Yekutyisidzira Kudzivirirwa kwemagumo, Hofisi 365 ATP yeemail uye kubatana, Azure ATP yekuzivisa ziviso, uye Microsoft Cloud App Security ye software-se-se-sevhisi kunyorera.
Pakutanga gore rino, Microsoft yakagovana iwo echinyakare algorithms uye emhando dzekufunda yakavakirwa muMicrosoft chengetedzo mhinduro idzo dzakadzidziswa muna 8 tiririyoni ezuva nezuva kutyisidzira masaini.
Microsoft Dambudziko rekudzivirira inoshandisa iyi AI kubatsira zvikwata zvekuchengetedza kuisa pamberi uye kuita pane zvese zviyeuchidzo mumasangano, uyezve zvinotsvaga zvinotyisa pakati pevashandisi, email, kunyorera, uye magumo (Windows, macOS, uye Linux). Mhinduro yacho inoferefeta kutyisidzira, inovapindura, uye inongozvidzoreredza zvinhu zvakakanganiswa kunzvimbo yakachengeteka pasina kupindira kwevanhu.
Ukuwo, Insider Risk Management inozvitsanangura seyeti yekuongorora yevashandi uye kutevedza kwemakambani izvo zvava kutengeswa padanho reGA pasirese. Insider Risk Management yakagadzirirwa kuteedzera mushandi 'zviitiko zvine njodzi huru' uchishandisa hungwaru hwekunyepedzera uye matekinoroji ekudzidza emuchina,
Iyo zvakare inobata yambiro uye dashibhodhi maonero, inotora matanho pamishumo yako inogona kuvimba nekushandisa mamwe maMicrosoft 365 maturusi senge Microsoft's Advanced eDiscovery sevhisi kuunganidza kesi data. Kuteedzera kunogona kubiwa kwedata kunoenderana nekushandisa kwako kweMicrosoft 365 HR Connector. Kuongorora data rakaburitswa kunoda Microsoft 365 Dhata Yekurasikirwa neDziviriro sevhisi
Kune iro chikamu, Microsoft Defender ATP yeLinux yaive zvakare iripo kutanga nhasi kuti vanhu vazviongorore. Kutevera mutsoka dzevashandisi veApple Inc. vakawana vhezheni yeMacOS munaKurume, Linux vhezheni inotsigira maseva kumhanya dzakaparadzirwa vhezheni kubva kuRHEL 7+, CentOS Linux 7+, Ubuntu 16 LTS kana yakakwira LTS, SLES 12+, Debian 9+ uye Oracle EL 7.
Izvi zvinopa maneja vachishandisa Microsoft Defender ATP endpoint kasitoma kuwana kune rairo yekuraira antivirus chigadzirwa icho chinofudza chero zviwanikwa zvinotyisidzirwa kuMicrosoft Defender Security Center.
Kunyangwe kusvika kweshanduro yeLinux kwanga kusiri kushamisika sezvo Microsoft yakanga yazvitaura munguva yakapfuura, kuziviswa kweiyo iOS uye Android shanduro kwakauya sechishamiso.
Mune chirevo, mutevedzeri wemutungamiri weMicrosoft, Rob Lefferts, akadaro
Vanhu vanogona kupedzisira vobvumira malware pamidziyo yavo nekuisa maapplication avanowana kunze kweGoogle Play uye kuti nhare mbozha dzinogona zvakare kuve pasi pehunyengeri. Akawedzera kuti Defender inogona kubatsira makambani kuti aite kuti vashandi vasanyanya kunetseka pakurwiswa kwakadai.
Nguva yenguva yekuti Microsoft yaizoburitsa maApple neApple vhezheni haina kutaurwa, kunyangwe ichinzi yaizowanikwa gare gare gore rino. Microsoft yakacherekedza izvozvo
"Zvinopa chiratidzo chekudyara kwedu mukufambisa kwekutyisidzira kwenhare nebasa ratiri kuita kuunza mhinduro dzedu kuApple neIOS" kumusangano weRSA muSan Francisco svondo rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Defender ATP yave kuwanikwa yeLinux uye munguva pfupi yeIOS uye Android
Kudzivirirwa kwakanyanya kwe linux hakusi kuisa chero chinhu kubva kuMicrosoft.
Mephisto Feles akadaro
Iyi ingori "Trojan Horse" pachikamu cheMicrosoft inoratidza "rudo rwemahara software" uye kuchave nevazhinji vanozoigamuchira vachifara.
Iko kune kudikanwa kwesystem yakadai mune yeGnu / Linux nharaunda, kunyangwe padanho rebhizinesi?
Munharaunda yeGnu / Linux yaizongoshanda kuchengetedza maWindows masisitimu ayo anoshanda pamwe nayo, mukati meLinux ine zvishoma kana isina chinhu.
Iye anongova monstrosity akaberekerwa muhurongwa hwakazara nezvikanganiso uye kusagadzikana izvo zvisipo pano. Uye zvino ivo vanoda kuti titende kuti zvakafanira.
Pamwe izvozvi zvinouya zvakachena, asi ndiani anovimbisa kuti mune ramangwana hazvizove malware kana telemetry, yekutarisa, yekutevera mudziyo ... chimwe chinhu icho Microsoft iri tenzi! Kunyangwe hazvo musika wemuLinux uchiri mudiki, kune makambani mazhinji anoshandisa yemahara software uye anomiririra muyedzo weMS, makambani anobuda mukutonga kwavo.
Kunge zvihwitsi zvinokwezva nhunzi.
Vachaburitsa yavo kodhi kodhi? ... yasara kuti ionekwe ...
Pindura Mephisto Feles
Facebook uye Sony vanodzima kutora kwavo chikamu mu GDC 2020 nekuda kwekutya Coronavirus
Mesa 20.0.0 inosvika nerutsigiro rweVulkan 1.2, yakawedzera rutsigiro uye nezvimwe